श्यामकुमार सिंह - साप्ताहिक
श्यामकुमार सिंहका लेखहरु
छोटोबाटोबाट सफलता प्राप्त गर्न सकिँदैन
श्यामकुमार सिंह, चैत्र २०, २०७२
सर, पर्सि मेरो फिजिक्सको परीक्षा छ, मलाई केही महत्त्वपूर्ण प्रश्न बताइदिनुहोस् न, रोहितले आफ्ना छिमेकी फिजिक्स टिचरसँग आग्रह गरे । रोहित, तिमीले यो वर्ष मन लगाएर पढ्नुपर्‍यो, किनभने यो बोर्ड परीक्षा हो । त्यसैले म तिमीलाई कुनै प्रश्न बताउँदिन, शिक्षकले उत्तर फर्काए ।
परीक्षाको तनावबाट मुक्त रहनुपर्छ
श्यामकुमार सिंह, चैत्र २, २०७२
प्रवेशिका परीक्षाको नजिकिंदै छ । त्यसैले परीक्षार्थीहरू यतिबेला तनावमा देखिन्छन् । तनाव दुई प्रकारका हुन्छन् : सकारात्मक र नकारात्मक । ती विद्यार्थी जसले वर्षभरि मन लगाएर पढ्छन् उनीहरूलाई आफ्नो पोजिसन मेन्टेन गर्ने जुन तनाव हुन्छ त्यो सकारात्मक तनाव हो भने
समूहमा कसरी पढ्ने ?
श्यामकुमार सिंह, फाल्गुन ११, २०७२
शिक्षकद्वारा विद्यालयमा पढाइएको कुरा मात्र परीक्षाका लागि पर्याप्त हुँदैन । विषयलाई पूरा गर्न र परीक्षाको समुचित तयारीका लागि कोचिङ, ट्युसनजस्ता अतिरिक्त पढाइ अनिवार्य जस्तै भैसकेको छ । कतिपय विद्यार्थी साथीहरूसँग मिलेर सामूहिक अध्ययन गर्न रुचाउँछन् ।
लोकसेवा आयोगको परीक्षा के गर्ने, के नगर्ने ?
श्यामकुमार सिंह, फाल्गुन २३, २०७१
विभिन्न प्रशासनिक सेवामा प्रवेश पाउन लोकसेवा आयोगद्वारा लिइने खरिदार, नायव सुब्बा तथा शाखा अधिकृतको विभिन्न चरणको परीक्षा तीन चरणमा सञ्चालन हुन्छ
लोकसेवा आयोगको परीक्षामा भाषाको भूमिका
श्यामकुमार सिंह, माघ ९, २०७१
लोकसेवा आयोगको परीक्षामा सफलता प्राप्त गर्न भाषाको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।
अब खेलकुदमा पनि करियर
श्यामकुमार सिंह, जेष्ठ ९, २०७१
खेलाडीको सरसामान, भोजन, आवास, भ्रमण एवं सुरक्षासँग सम्बन्धित आवश्यकताको प्रबन्धन खेल प्रशासकले गर्नुपर्छ।